Barcelona Oo Camp Nou Ku Soo Cashirisay Liverpool, Lionel Messi Oo Laba Gool Indhaha Caalamka Ku Xaday Iyo Blaugrana Oo Shaqadeedii Ugu Waynayd Sii Qabsatay – Cadalool.com
May 2, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Barcelona ayaa Camp Nou ku soo dubatay Liverpool iyada oo Blaugrana lug la sii gashay finalka UEFA Champions league. Luis Suarez ayaa goolka furitaanka qaybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay Barcelona laakiin Lionel Messi ayaa laba gool raaciyay qaybtii labaad ee ciyaarta.
Inkasta oo ay Liverpool cadaadis badan ku abuurtay Barcelona isla markaana ay heshay fursado ay goolal ku dhalin kartay, haddana markii ay Reds ku fashilantay in ay fursadaheedii ka faa’iidaysan wayday ayay Barcelona awooday in ay si buuxda uga faa’iidaysatay fursadihii muhiimka ahaa ee ay Reds ku heshay.
Barcelona ayaa Anfield iskeeni doonta iyada oo ah kooxda u baahan in ay natiijadan ilaashato oo kaliya halka Liverpool ay hadda sugayso shaqo buur fanasho ahi kadib markii ay guuldaro waji gabax ah kala soo laabteen Camp Nou.
Barcelona ayaa sii dheeraysatay rekoodhkeedii Camp Nou iyada oo 32 kulan oo xidhiidh laakiin Barcelona ayaa ku guulaysatay in ayna Liverpool wax goolal marti ah sii dhalin taas oo dhibaato wayn ku noqon doona kooxda Jurgen Klopp ee Reds.
Kaydka: Dejan Lovren, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Simon Mignolet, Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Trent Alexander-Arnold.
Kadyka: Nelson Semedo, Arthur, Ousmane Dembele, Jasper Cillessen, Malcom, Samuel Umtiti, Carles Alena.
Jamaahiirta Barcelona ayaa si layaableh u soo buux dhaafiyay Camp Nou maadaama oo uu ahaa kulankii ugu danbeeyay ee ay xili ciyaareedkan Barca ku ciyaaraysay Camp Nou ee Champions league waxaana kulankan ka soo xaadiray 98,299 kun oo qof.
Qaybtii hore ee kulankan ayaa ahaa mid tatiko badan ku dhisnaa isla markaana ay ciyaartu si wayn u xidh xidhnayd waxayna Liverpool bilawgii ahayd kooxda halis badan abuurtay isla markaana fursado heshay laakiin ku fashilantay in ay xataa Ter Stegen tijaabiso.
Barcelona ayaan qaab fiican ku bilaaban iyada oo waliba kubbada aan si fiican lugta ula helin laakiin markii ay ciyaartu sii socotayba Barcelona ayaa kalsooni helaysay inkasta oo Liverpool ay awooday in ay kala joojiso kubbad hayntii Barcelona iyo waliba weerarkii badnaa.
Inta badan qaybtii hore ee ciyaarta Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa cidlo joogay waxayna Barcelona tatikadeeda u badashay kubbado meel fog layskaga tuurayay iyo difaacasho ay ku joojinaysay weerarka Liverpool waxayna qabta hore ahayd mid ay labada kooxood aad iskugu dhawaayeen balse ay Barcelona natiijo ahaan ku horaysay.
Daqiiqadii 13 aad Barcelona ayaa fursado isku xigay heshay iyada oo Lionel Messi iyo Coutinho ay shaqo fiican qabteen laakiin Robertson ayaa si cajiib ah fursad u daboolay halka Van Dijk uu noqday xidiga kubbada halista ku ahayd kooxdiisa iska saaray.
Sadio Mane iyo Lionel Messi ayaa ku dooday in mid kastaaba uu helay fursad ay rekoodhayaal ku heli kareen iyada oo Messi uu ku dooday in Matip uu kubbada gacan u adeegsaday halka Mane uu qalad kula kulmay xerada ganaax abalse garsooraha ayaan midna waxba ka soo qaadin.
Daqiiqadii 24 aad dhibaato wayn oo dhaawac ayaa Liverpool soo gaadhay kadib markii uu Naby Keita awoodi waayay in uu ciyaarta sii wato wuxuuna dhaawacani ku soo gaadhay taakal xun oo uu Ivan Rakitic kala kulmay taas oo Klopp ku qasabtay in uu qorshihiisii ciyaarta badalay waxaana la soo galiyay Henderson.
Daqiiqadii 26 aad Barcelona ayaa ugu danbayn jabisay ismari waagii ciyaarta kadib markii uu Luis Suarez ku soo duulay kubbad caawin uu ka helay Jordi Alba wuxuuna goolkani ahaa mid uu Suarez kaga baxay abaartii xumayd ee ka haysatay gool la’aanta Champions league.
Tan iyo bilawgii xili ciyaareedkii hore Luis Suarez ayaa dhaliyay goolkiisii labaad oo kaliya ee Champions league laakiin waxaa layaableh in labada gool ee labada sanadood ah uu kawada dhaliyay goolhaye Alisson oo marka hore AS Roma joogay isla markaana uu hadda Liverpool kaga dhaliyay.
Luis Suarez ayaan wax ixtiraam ah u muujin kooxdiisii hore ee Liverpool wuxuuna kaga dhabeeyay wacadkii uu ku maray in uu ku dul dabaal degayo haddii uu gool dhaliyo. Goolkan ayaa sidoo kale ahaa goolkii 500 aad ee ay Barcelona ka soo dhalisay Champions League waana kooxdii labaad oo kaliya ee heerkan gaadhay iyada oo Real Madrid ahayd kooxdii uga horaysay.
Liverpool ayaa isku dayday in ay ka dagaalanto goolka looga hor maray laakiin waxay qaybtii hore awoodi kari waayeen in ay jawaab bixiyaan halka Barca lafteedu ay ku dhibtoonaysay in ay goolal kale keensato waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 1-0 ay Barca hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Liverpool soo laabtay kooxda laga filan karayay in ay goolka barbaraha keensato waxayna Reds abuurtay in ay cadaadis badan saartay Barca oo difaacasho ku soo laabtay.
Daqiiqadii 47 aad goolhaye Ter Stegen ayaa awooday in uu James Milner ka badbaadiyay fursad gool loo fishay kadib markii ay Salah iyo Wijnaldum soo shaqeeyeen wuxuuna Ter Stegen awooday in uu Barcelona hogaanka u sii ilaaliyay.
Daqiiqadii 53 aad Mohamed Salah ayaa ugu danbayn si buuxda u tijaabiyay goolhaye Ter Stegen kadib markii uu xidiga reer Masar kubbad uu lugta bidix ku darbeeyay uu Ter Stegen ugu qasbay in uu kubbada dirqi ku joojiyiay, wuxuuna markale Ter Stegen noqday xidiga Barca gool cadaan ah ka badbaadiyay.
Cadaadiska Liverpool ayaa sii socday ee ay goolka barbaraha ku raadinaysay halka Barcelona ay markan awooda saartay sidii ay goolka ay hogaanka ku haysay u ilaalin lahayd laakiin Ter Stegen ayaa wali ahaa kan ay Liverpool dhaafi kari wayday.
Daqiiqadii 59 aad Liverpool ayaa u qaadatay in ay goolkeeda barbaraha heshay laakiin Ter Stegen ayaa meel gaaban ka joojiyay kubbad uu James Milner goolkan ku dhalin lahaa iyada oo Salah uu si cajiib ah uga soo shaqeeyay kubbad dheer oo uu Van Dijk ka helay.
Daqiiqadii 60 aad Valverde ayaa u adkaysan kari waayay xaalada ay kooxdiisa Barcelona ku jirtay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Nélson Semedo wuxuuna saaray Philippe Coutinho taas oo keentay in Sergi Roberto uu difaaca midig ka soo wareegay oo uu khadka dhexe soo galay.
Daqiiqadii 64 aad Barcelona ayaa heshay fursadii ugu fiicnayd ee qaybtii labaad ee ciyaarta intii lagu jiray kadib markii uu Lionel Messi kubbad dilaa ah u bixiyay Arturo Vidal laakiin xidiga reer Chile oo haystay fursad uu goolka ku toogan kari lahaa ayaa kubbada isku dayay in uu goolka hor mariyo waxaana Van Dijk ayaa halista ka saaray kooxdiisa Liverpool.
Daqiiqadii 75 aad Barcelona ayaa ugu danbayn iska dul qaaday culayskii waalida ahaa ee saarnaa waxayna Liverpool ku ciqaabtay fursad lumintii ay ku soo jirtay kadib markii uu Lionel Messi helay fursada uu goolkiisii ugu horeeyay kaga dhaliyay Liverpool.
Luis Suarez ayaa darbo birta ugu garaacay Liverpool laakiin kubbada soo booday ayuu Lionel Messi noqday xidiga ugu deg dega badnaa ee markiiba ka falceliyay wuxuuna goolka oo madhan ku taabtay kubbada uu goolkan ku dhaliyay.
Goolkan ayaa noqday goolkii 25 aad ee uu Lionel Messi ka dhaliyay kooxaha Ingiriiska iyada oo Liverpool noqotay kooxdii ugu danbaysay ee lixda kooxood ee Premier League ugu waa wayn ee dhibane u noqotay Lionel Messi.
Daqiiqadii 79 aad Klopp ayaa ciyaarta soo galiyay Roberto Firmino isaga oo saaray Wijnaldum laakiin Barcelona ayaa markan noqotay kooxda kalsoonida buuxda heshay waxayna raadinaysay sidii ay ciyaarta si buuxda ugu dili lahayd.
Daqiiqadii 82 aad Alla muxuu gool ahaa! Lionel Messi ayaa gool layaableh oo laaga xorta ah ku yimid waxa uu kaga yaabsatay goolhaye Alisson Becker kaas oo si buuxda ugu fashilmay in uu joojiyo darbada uu Messi ka soo tuuray meel aad uga baxsanayd xerada ganaaxa wuxuuna Messi ciyaarta ka dhigay 3-0 ay Barca ku dubanayso Liverpool.
Lionel Messi ayaa dhaliyay labada gool ee uu ku dhamaystiray goolasha 600 ah ee heerka kooxaha ku soo dhaliyay wuxuuna barbareeyay rekoodhkii uu dhawaan Ronaldo gaadhay. Ronaldo ayaa April 27 dhaliyay goolkiisii 600 aad heerka kooxahalka Messi uu kulankii Liverpool ku gaadhay goolkiisii 600 aad ee Barcelona inkasta oo ay kulamo ahaan aad u kala badan yihiin.
Daqiiqadii 84 aad Birta Goolka!! Nasiib Xumada Liverpool ayaa halkeeda ka sii socotay kadib markii uu Mohamed Salah helay fursad gool cadaan ah laakiin darbo uu u arkayay in uu gool ku dhalinayo ayaa birta goolka Barcelona ka soo booday.
Dhamaadkii ciyaarta Barcelona ayaa lumisay fursado cadaan ahaa oo ay ugu yaraan laba gool ku dhalin kartay iyada oo Dembele uu qasaariyay fursad hadiyad ahayd oo uu u baahnaa in uu Alisson oo kaliya kubbada dhaafiyo.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 ay Barcelona cashar lama ilaawaan ah ugu soo dhigtay Liverpool isla markaana ay hal talaabo u sii jirsatay in ay u soo baxdo finalka UEFA Champions league halka Liverpool ay Anfield ku ciyaari doonto iyada oo rajadeedu ay aad u liidato.